काम अनुसारकाे रेकर्ड राख्ने महान शैली – आफ्नो प्रेरक संसार
काम अनुसारकाे रेकर्ड राख्ने महान शैली
Bibas Kulung — १३ पुष २०७८, मंगलवार १०:१६0comment
धेरै पहिलेको घटना हो । दुई मित्र एउटा घना जङ्गलको बाटो हुँदै सहरतिर जाँदै थिए । गर्मी निकै थियो । बिचबिचमा रोकिँदै, आराम गर्दै, खोल्सामा भेटिएको पानीले प्यास मेटाउँदै उनीहरू अघि बढिरहे । लामो बाटो पार गर्नुपर्ने हुनाले दुवैले घरबाटै खाजा बनाएर साथमा ल्याएका थिए । भोक बढ्दै गएपछि दुवैले एउटा फराकिलो ढुंगामा बसेर खाजा खाने सहमति गरे ।
उनीहरू कुराकानी गर्दै खाजा खाँदै थिए । कुरैकुरामा कुनै विषयलाई लिएर दुवैबीच विवाद सुरु भयो । विवाद यति बढ्यो कि पहिलो साथीले जुरुक्क उठेर दोस्रो साथीको गालामा एक थप्पड लगायो । थप्पड खाएर पनि दोस्रो साथीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । उसले केवल एउटा सानो छेस्को टिप्यो र माटामा लेख्यो– आज मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीले मलाई एक थप्पड हिर्कायो । यसैबीच दुवैले चुपचाप खाजा खाइसके । केही बेरपछि दुवैले सँगसँगै यात्रा सुरु गरे । तर, दुवैबीच आपसमा बोलचाल भने भएन । अघि बढ्दै जाँदा केही अघि थप्पड खाने साथी चिच्याएको आवाज आयो ।
भूलवश ऊ दलदलमा फसेको थियो । साथी त्यसरी दलदलमा फसेको देखेपछि पहिले थप्पड हिर्काउने साथीले अनेक प्रयत्न गरेर उसलाई दलदलबाट बाहिर निकाल्यो । दलदलबाट बाहिर निस्किसकेपछि दलदलमा फस्ने साथीले एउटा अलि कडा खालको ढुंगो टिप्यो र अर्को ढुंगामा घोटीघोटी लेख्यो– आज मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीले मेरो ज्यान बचायो ।
यो सब देखेपछि थप्पड हिर्काउने साथीले उसलाई सोध्यो– मैले थप्पड हिर्काएपछि तिमीले माटामा लेख्यौ, अहिले ढुंगामा लेखिरहेका छौ ? यसको कारण के हो ? अर्को साथीले ऊतिर हेर्दै जवाफ दियो– नराम्रो काम हावाको झोकासँगै मेटिएर जाओस् भनेर मैले माटामा लेखेको थिएँ भने राम्रो कामचाहिँ कहिल्यै नमेटियोस् भनेर यसरी ढुंगामा लेखेको हुँ ।
motivational story प्रेरक कथा मनछुने कथा राम्रा कथा सफल कथा
वाल्मिकीका प्रेरक भनाइहरू
आफू रुँदै जन्मेर अरुलाई रुवाउँदै मर्ने जात हो मान्छे
खप्तड स्वामीका भनाइहरू
असल पितामा हुनुपर्ने गुणहरू
नेल्सन मण्डेलाका चर्चित २० भनाइहरू
मायाप्रेम सम्बन्धी महान भनाइहरू
रोबिन शर्माका प्रेरक भनाइहरू